Muvhuro, Zvita 19, 2011 Douglas Karr
A chinguva chakadzoka, isu takaisa yakawanda-dura (kwete subdomain) kuisirwa kweWordPress nekugonesa iwo akawanda-mushandisi maficha uye kumisikidza yakawanda-dura plugin. Kana tangowana zvese zvichishanda, imwe yenyaya dzatakamhanyira machiri yaive rekupinda loop kana mumwe munhu aiedza kupinda muWordPress pane imwe yenzvimbo. Chakatonyanya kushamisa, zvaiitika paFirefox neInternet Explorer, asi kwete Chrome. Isu takateedzera nyaya kusvika pakushandisa browser
Sezvaungave iwe uchiziva, kublogi chinhu chikuru chemukati kushambadza chiitiko uye kunogona kutungamira kune yakagadziriswa injini dzekutsvaga, kusimba kwakasimba, uye zvirinani zvemagariro midhiya kuvapo. Nekudaro, chimwe chezvinhu chakaomesesa mablogging chiri kutora mazano. Pfungwa dzeBlog dzinogona kuuya kubva kunzvimbo zhinji, kusanganisira kudyidzana kwevatengi, zviitiko zvazvino, uye nhau dzemabhizimusi. Nekudaro, imwe nzira huru yekutora blog mazano ndeyokungoshandisa mitsva mitsva yeGoogle mhedzisiro. Nzira yeku
Chitatu, September 10, 2008 China, Gunyana 25, 2014 Douglas Karr
Sezvo ini ndichiona kukura kweCompendium Blogware, zvinonyatsodziya moyo wangu kuti ndakaita chinzvimbo chekutanga (uye nekuenderera mberi nebasa nepandinogona napo) mune bhizinesi riri kuchinja hunhu nemamiriro ekuti mabhizinesi anotaurirana sei nezvavanotarisira uye vatengi. Chris Baggott muevhangeri anoshamisa wepakati uye kambani yake chipupuriro kune wepakati, zvinoshandiswa zvinogonesa kutaurirana uku, uye kukwikwidza kukuru kwekuisa
Nezuro, ini ndakanyora maitiro ekuverenga yako Izwi Kuverenga uchishandisa MySQL pane yako blog zvinyorwa zveWordPress. Ini ndaida kuongorora zvandatumira kuti ndione kana bhurogu yangu yakakanganiswa nekureba kwakaita zvandaitumira. Heino mhedzisiro! Mapeji Anoshanya vs. Word Count Mhedzisiro yacho? Nemwedzi mitanhatu yezvinyorwa zvezuva nezuva (dzimwe nguva zvakatumirwa zvakapetwa pazuva) uye neshoko rinosanganiswa kuverenga kwezuva rega rega, ndinogona kutaura zvachose kuti huwandu hwemazwi
Kuwedzera Readership yako
Muvhuro, Nyamavhuvhu 11, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kunyangwe iwe uri wekudyidzana blogger kana uchingova neyako blog, imwe yekukura zvinhu zveblog rako zvinoenderana nekugona kwako kusvika kune vatsva vaverengi vasingazive yako blog iripo. Ndinoita izvi kubudikidza nemaitiro akati wandei… mukukosha kwadzo ndedzekutaura pamusoro pemamwe mablog, kunyanya kana ivo vari muindasitiri imwechete. Ndinovawana kuburikidza neGoogle Alerts, Blogsearch paGoogle, uye Technorati. Ini ndinoburitsa RSS yangu